Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ဒေသန္တရသတင်း > စင်ပြိုင်အစိုးရတရပ် မလိုအပ်တော့၍ ဖျက်သိမ်းလိုက်
စင်ပြိုင်အစိုးရတရပ် မလိုအပ်တော့၍ ဖျက်သိမ်းလိုက်	နေမျိုး	| သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၃၇ မိနစ်	နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းများအရ စင်ပြိုင်အစိုးရ တရပ် ထားရှိရန် မလိုအပ်တော့၍ အမျိုးသား ညွှန်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB အား ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးနှင့် လူထု ဆက်ဆံရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည့် ဒေါက်တာတင့်ဆွေ က ပြောသည်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရော၊ ကျောင်းသားတွေရော ပြည်ပကို ထွက်ပြီးမြန်မာပြည် အခြေအနေကို ပြောနိုင် ဆိုနိုင်ပြီ။ ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဦးတည်ချက် လမ်းကြောင်းဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဦးတည်ချက်ကို သွားနေတော့ ကျနော်တို့ဟာ ဒီလမ်းကြောင်းမှာ အစိုးရတခုရဲ့ စင်ပြိုင်နေတဲ့ အစိုးရတရပ်ဟာ ခလုတ် ကန်သင်းလိုပေါ့၊ အဆီးအတား မဖြစ်စေချင်တဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့လည်း ဖျက်လိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။၁၉၉ဝ ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် NCGUB အား ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် တောက်လျှောက် တာဝန်ယူခဲ့သည့် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ထိုစဉ်က အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ ရလဒ်အား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင် ဦးဆောင်သည့် နဝတ စစ်အစိုးရက အကောင်အထည်ဖော်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့၍ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပါတီများ စုစည်းကာ စင်ပြိုင်အစိုးရ အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ကြပြီးနောက် ၂၁ နှစ်တာကာလအတွင်း တတ်စွမ်းသမျှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း နယူးဒေလီ မြို့နေ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ က ဆက်လက်ပြောပြသည်။“အတိုချုပ်အားဖြင့် ပြောရရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု၊ တပ်၊ တိုင်းရင်းသား အင်အာစုတွေဆိုတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးကို ဦးတည်ထားတဲ့အတိုင်း ၁၉၉၄ ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ ပါလာခဲ့တယ်။ DVB အသံလွှင့်ဌာန ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး သန်းနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ပညာ/ကျန်းမာ အထောက်အကူတွေရအောင် NHEC (အမျိုးသား ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ကော်မတီ)ကို ဖွဲ့ပြီး နှစ်စဉ် ဘတ်သန်းနဲ့ ချီပြီး အကူအညီတွေ ရအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂက ရတဲ့ နည်းပညာ အကူအညီ၊ ငွေကြေး အကူအညီတွေကို တိုင်ရင်းသားအရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ EBO လို့ခေါ်တဲ့ ဥရောပမြန်မာရုံးကို ဘရပ်ဆဲလ် မှာ ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်း ချမ်းရေး၊ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းလာရေး တို့အတွက် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းက ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိမ်းချုပ်ရာ မာနယ်ပလော ဌာနချုပ်တွင် စင်ပြိုင်အစိုးရ တရပ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် လှုပ်ရှားခဲ့သည်။NCGUB အား ထောက်ခံအားပေး ကူညီခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပါတီများအား အထူး ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိကြောင်းလည်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း ရှိသရွေ့ တိုင်းပြည်အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်းလည်း “ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိုင်ငံရေး လိပ်ပြာ သန့်သန့်ရှိတာ အမှန်ပါ။ ကျနော်တို့ကို ၁၉၉ဝ လူထုက ပေးလိုက်တဲ့ Mandate (အခွင့်အာဏာ) အတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ တတ်စွမ်း သရွှေ့ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြတယ်လို့ စိတ်သန့်သန့်ပဲ ရှိပါတယ်” ဟုလည်း ၁၉၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် ၂ မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် ဒေါက်တာတင့်ဆွေ က ဆိုသည်။ထိုသို့ ၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့အား ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတဦး အနေဖြင့် မည်သို့ ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်သွားမည်နှင့် ပတ်သက်၍မူ “ကျနော့်ပါတီ၊ ကျနော့် မဲဆန္ဒနယ်က ကျနော့်ကို ဘယ်နေရာမှာ ပိုလိုအပ်သလဲဆိုတာမှာ မူတည်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်မှာပါ” ဟု ၎င်းက မဇ္စျိမကို ပြောကြားသွားသည်။ယခုကဲ့သို့ NCGUB စင်ပြိုင်အစိုးရကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သော်လည်း ပြည်ပရောက် ၁၉၉ဝ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် MPU (လွှတ်တော် အမတ်များအဖွဲ့)မှာ ကျန်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများ စုဖွဲ့မှု ပုံစံပြောင်းမည်	ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဦးဟန်ယောင်ဟွေ ခရီးစဉ်	ဦးဟန်ယောင်ဟွေ မြန်မာပြည်သွား ပြည်ပရောက်များနှင့် အင်တာဗျူးများ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြ	သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် မြန်မာအစိုးရကို CPJ တိုက်တွန်း	နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး အတွက် မြန်မာကို အိန္ဒိယအမတ်များ ပန်ကြား	သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့ ပြည်တွင်းမှ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုခွင့်ရနေ	Who is Online
We have 41 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved